कहिले खुल्छ अग्रिम टिकट बुकिङ ? यस्तो भन्छन महासंघका महासचिव सरोज सिटौला (भिडियो सहित) — Motivatenews.Com
कहिले खुल्छ अग्रिम टिकट बुकिङ ? यस्तो भन्छन महासंघका महासचिव सरोज सिटौला (भिडियो सहित)
काठमाडौं – दशैका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ अन्यौंलमा परेको छ।
सरकार र यातायात व्यवसायीवीच शुक्रबार भएको छलफल निष्कर्षविहिन भएपछि अग्रिम बुकिङ अन्योलमा परेको हो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार अनिश्चित कालसम्मका लागि अग्रिम बुकिङ अन्योल भएको हो ।
गोर्खा एफएमबाट प्रशारित पत्रकार शोभराज बरालको कार्यक्रम संबाद चौतारीमा कुरा गर्दै सिटौलाले आफ्ना माग सरकारसँग राखेको र उहाँहरुले आफूले राखेका मागका बारेमा अर्को बैठकमा टुंगो लगाउने सहमति भएको बताए ।
यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायीबीच असोज ५ गतेबाट अग्रिम बुकिङ खोल्ने सहमति भएको थियो। तर आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यबृद्धि गरेपछि विज्ञप्ती निकाल्दै ४८ घण्टाभित्र मुल्यवृद्धि फिर्ता नलिए बुकिङ नखोल्ने अडान ब्यबसायीले लिएका थिए।
व्यवसायीहरु सरकारकासँग पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि फिर्ता, रोक्का भएको खाता फुकुवा, भाडा समायोजनको शर्त राखेका छन् । समितिहरुको खाता रोकिएका कारण कर्मचारीलार्इ तलव खुवाउन नसकिएको, घाइतेको उपचार गर्न नसकिएको भन्दै बैक खाता खोलिदिन माग गरेका छन्।